Manjaka tanteraka ireo jiolahy manendaka any anaty fitohanan’ny fifamoivoizana eny Faravohitra. Manao andiany ireo jiolahy sady mitondra sabatra. Mitebiteby ny olona eny an-toerana satria tsy afa-manoatra manoloana ireo jiolahy. Manahy ny sasany amin’izy ireo fa mety hiitatra hanafika trano ry zalahy rehefa tsy mahita fiara hoendahina.
Jiolahy miisa efatra nitondra basy iray no tompon’antoka tamin’ny fanafihana tokantrano iray tao Masimbahiny Ambohimalaza, asabotsy teo. Voalazan’ireo niharam-boina fa nisaron-tava ireo olon-dratsy ka niditra an-keriny tao an-trano. Lasan’ireo jiolahy tamin’izany ny firavaka volamena, vola 4 hetsy Ar ary finday. Ny zanday ao Ambohimalaza no misahana ny famotorana.
Tompon’omby iray maty voatifitra nandritra ny fanafihan-dahalo tao Bebozaka Antsoha Belo Tsiribihina, afakomaly. Miisa 20 ireo dahalo ary nitondra basim-borona miisa 18. Lasan’ireo dahalo tamin’izany ny omby 30 an’ilay tompon’omby. Mitohy ny fanarahan-dia ataon’ny zandary.